Cali Guudlaawe oo maanta safarkiisii ugu horeeyay ku tagaya Muqdisho – AfmoNews
Cali Guudlaawe oo maanta safarkiisii ugu horeeyay ku tagaya Muqdisho
Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), Madaxweynaha cusub ee Hirshabelle ayaa waxaa maanta lagu wadaa in safarkiisii ugu horeeyay uu ku taggo Magaalada Muqdisho, tan iyo markii xilka loo doortay 11-kii bishii November ee sanadkii 2020.
Madaxweynaha ayaan ka safrin Magaalada Jowhar ee Xarunta Maamulka Hirshabelle, tan iyo markii xilkaasi loo doortay muddada labada bilood laga jooggo.
Madaxweynaha Hirshabelle ayaa hawlo shaqo u taggaaya Magaalada Muqdisho, iyadoona lagu wado in uu kula kulmo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo bulshada reer Hirshabelle ee magaalada degan.
Soo dhaweynta Madaxweynaha ayaa si weyn looga diyaargaroobay Magaalada Muqdisho, sida ay inoo sheegeen Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Hirshabelle.
Sida uu qorshuhu yahay Madaxweyne Guudlaawe ayaa maalmaha soo socdo ku naggaan doono Caasimadda Muqdisho.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in kulanka uu la leeyahay Madaxweyne Farmaajo looga hadli doono arrimaha doorashooyinka ee dalka, oo dhinacyada siyaasadda qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin, qaabka ay wax u socdaan.
Guudlaawe waxaa lagu tiriyaa Madaxda Dowlad Goboleedyada ee xiriirka dhow la leh Villa Somalia, iyadoo Villa Somalia ay ka taageertay inuu ku soo baxo doorashadii madaxtinimada Hirshabelle ee 11-kii November ka dhacday Magaalada Jowhar.
Muqdisho waxaa maalmihii la soo dhaafay ka socday kulamo xal loogu raadinayay khilaafka raggaadiyay arrimaha doorashooyinka ee dalka.